Fetin'aina sy Alahadin'ny Advento 2017 FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Fisaorana sy fankasitrahana ny Pastora RASETA – nov. 2016
Fetin’aina sy Alahadin’ny Advento 2017
Misaotra an’i Jesosy isika Fiangonana FLM Orléans fa nomeny iny taona lasa iny indray, nanehoany antsika ny fitiavany sy ny famindrampony tamintsika, ary nandrotsahany tamintsika ny Fahasoavany.
Hiditra taom-baovao indray isika ankehitriny, ka ny laharana fahatelo amin’ny Perikopa no anjarantsika mandritra ny taom-piangonana.
Noho ireo Antony ireo dia hankalaza ny Fetin’aina tahaka izay efa natomboka tamin’ny taon-dasa isika.
Marihina moa fa sady Fetim-piangonana no Fetin’ny zanaka am-pielezana
Ny fety dia natao hisaorana an’Andriamanitra ka iarahan’ireo taranaka ireo manao ezaka fampandrosoana ny Fiangonana.
Ny ankohonana tsirairay dia handray ny anjara valopiny any amin’ny Diakona ary hameno izany an-tsoratra horaketina anaty bokim-bolan’ny Fiangonana. Arotsaka mandritra ny rakitra io valopy io, ary andraisan’ny ankohonana rehetra eto amintsika anjara.
Samy ho avy hisaotra sy hanome voninahitra an’Andriamanitra isika sy ny ankohonantsika (taranaka) rehetra amin’io fotoana io ka hiara-paly ny ankohonan’Andriamanitra rehetra. Samy mitondra sakafo maivana na tsakitsaky sy ifampizaràna ny rehetra ary hiaraha-komana izany ao aorian’ny fotoam-pivavahana litorjika.
Dia miarahaba antsika rehetra sahady ny amin’izany fotoana izany tompoko ary manonona ny Fiadanan’i Jesosy ho an’ny isan-tokantrano sy ho an’ny Fiangonana manontolo. Hiroso hatrany anie isika amin’ny finoana an’i Jesosy ka ho hita eo amin’ny fiainantsika marina izany.
Fanentanana Fetin’Aina tamin’ny 2016, hitanao eto.